Arsenal oo Hogaanka Horyaalka Ingiriiska qabatay iyo Labada Manchester oo la garaacay (Sawirro) | Salaan Media
Arsenal oo Hogaanka Horyaalka Ingiriiska qabatay iyo Labada Manchester oo la garaacay (Sawirro)
Kulamadii 6aad ee Horyaalka Ingiriiska ee loo yaqaano Premier League ayaa maanta la ciyaaray, iyadoo ciyaaruhu ay ahaayeen kuwo aad u xiiso badnaa, kadib markii kooxo waa weyn laga badiyay.
Arsenal ayaa hogaanka Premier League ku qabatay labo dhibcood oo nadiif ah, kadib markii ay ka badisay koxoda Swansea City 2-1, waxaana ciyaartan ay aheyd mis gaar ah isha loogu haayay natiijadeeda.
Kooxda Arsenal ayaa ka faa’ideysatay bar bar dhacii ay gashay kooxda Tottenham oo ku dhibco aheyd, waxaana guushan ay ka gaartay Swansea ay u sahashay inay hogaanka ku qabato 15-dhibcood.
Ciyaaryahan Gnarby ayaa u dhaliyay kooxda goolkiisa u horeeyay, markii daqiiqadii 58aad ee qeybta labaad uu hogaanka u dhiibay, afar daqiiqo kadib ayaa waxaa Arsenal hogaanka u sii dheereeyay Aaron Ramsey oo maalmahan ku soo baxay gool dhaliyaha Arsenal.
Ramsey ayaa dhaliyay shan gool kulamadii u dambeeyay ee uu ciyaariyay, waxaana taas ay ka yeeshay in Tababare Arsene Wenger oo ciyaaryahano badan dhaawac uga maqan yihiin inuu ku tashto.
Kooxda Tottenham ayaa waxay bar bar dhac gool iyo gool ku kala baxeen kooxda Chelsea, waxaana ay hogaanka ay qabatay qeybtii hore ciyaarta oo uu gool u dhaliyay Tottenham ciyaaryahan Sigurdsson.
Laakiin qeybta labaad ee ciyaarta ayaa waxaa Chelsea u bar bareeyay ciyaaryahan John Terry oo kubad laad aheyd uu madax ku dhaliyay.
Fernando Torres ayaa Chelsea laga saaray, markii uu feeray ciyaaryahan ka tirsan Tottenham, waxaana la siiyay kaarka cas, labo jaalo oo uu ciyaarta ku qaatay kadib.
Kooxaha Manchester City iyo Manchester United oo todobaadkii hore wada ciyaaray, isla markaana Man City ay badisay ayaa labadooda la kulmay guuldaro xanuun badan.
Manchester United ayaa guuldaradeeda 3aad ee xilli ciyaareedkan soo gaartay markii kooxda Westbromwich ay Old Tarfford ugu badisay 2-1.
Goolasha ka dhashay Manchester United ayaa ahaa kuwo aad u qurux badnaa, waxaana ka muuqday difaac xumo, qaababka ay uga dhasheen, inkastoo gool markii hore looga hormaray uu u bar bareeyay ciyaaryahan Wayne Rooney oo laad xor ah u dhaliyay.
Sidoo kale kooxda Manchester City ayaa iyana lagu legday Villa Park, markii Aston Villa oo ay marti u aheyd looga adkaatay 3-2, inkastoo City ay goolasha ku hormareysay, hadana Aston Villa ayaa sameyneysay soo kabasho wanaagsan marka gool laga dhaliyay, waxaana goolhayaha Man City todobaadkii labaad laga dhaliyay laad xor ah oo uu si wanaagsan ciyaaryahanka Aston Villa Bacuna shabaqa gees uga geliyay.
Ciyaarihii kale ee maanta ayaa waxaa natiijadooda ahaayeen sida:-
Fulham 1 – 2 Cardiff City
Hull City 1 – 0 West Ham United